(ဒီနေ့toronto metro newspaperတွင်ဖေါ်ပြထားသောကာတွန်းပုံ)ပြီးခဲ့သည်အပတ်က ကနေဒါသို့အိုဘားမားပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်လည်ပတ်စဉ်ကနေဒါဝန်ကြီးချူပ်စတီဗင်ဟားပါးကပြောကြားခဲ့သောစကားဖြစ်သည်။ကနေဒါနှင့်ယူအက်အေကိုကြီးစိုးထားသူများသည်အင်္ဂလန်မှမြစ်ဖျားခံခဲ့သူများဖြစ်သည်။လက်ရှိအချိန်တွင်မူ ဆင်ဖြူတော်မှီကြံစုတ်ရသည်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။ဆင်ပိန်ကျွဲထက်တော့သာပါသေးသည်။စီးပွားကျဆင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကနေဒါခေါင်းဆောင်များ၏ကာတွန်းပုံများနေ့စဉ်လိုလိုသတင်းစာများတွင်ဖေါ်ပြခြင်းခံနေရသည်။ဦးသန်းရွှေကတော့ကာတွန်းနဲ့ဝေဖန်ဖို့နေနေသာ၊အချစ်ကဗျာပါမကျန်ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ရတနာမြေပုံအညွန်းဖေါ်သလိုရေငုတ်ရှာပြီးကြံဖန်အရေးယူသည်။ဆွေးနွေးပွဲလည်းမလုပ်ပေးအဝေဖန်လည်းတရားဝင်မခံနိုင်အကြောက်ကြီးကြောက်တတ်သောဦးသန်းရွှေစစ်ဝတ်စုံကြီးနှင့်မလိုက်ဖက်ပါ။ဒီလိုပြောင်းဝတ်လိုက်လျှင်တော့စာနာသည့်အနေနှင့်ဝေဖန်တာတွေလျော့သွားနိုင်ပါသည်။....................................................................................................................................................'""""'ဟင့်အင်း..၀တ်ချင်ဝူး....ငိုလိုက်မှာနော်...အဟင့်.....''''''''''''''''''''
အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများသည်တရားဝင်ကုမ္မဏီများမှတဆင့်သွားရောက်ပြီးနအဖ၏အခွန်ကောက်ခံခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။အာရပ်မှာအခုလိုမြန်မာမိန်းကလေးတဦးအစော်ကားခံရပြီးလမ်းဘေးမှာပိုးဆိုးပက်စက်အ၀တ်မပါအပစ်ခံထားရတာနအဖဘာလုပ်နေလဲ။ ။စုံစမ်းစစ်ဆေးသတင်းထုတ်ပြန်တာလုပ်ပေးပါ။ ။အစိုးရအစစ်မဟုတ်လို့ဒူဘိုင်းအစိုးရကိုအရေးမဆိုဝံ့တာလား။ရှေ့ဆက်အာရပ်ကုလားတွေစော်ကားတာမြန်မာမိန်းကလေးတွေငြိမ်ခံနေရမှာလား။ Police investigate woman's deathBy Siham Al Najami, Staff ReporterPublished: February 22, 2009, 23:10Dubai: A construction worker discovered the body ofadead Myanmarese woman inamanhole in Al Nahda, Dubai, on Sunday morning.The labourer, who was one of many at the scene, discovered the body at around 10am.The Dubai Police were contacted and the Criminal Investigation Department (CID) cordoned off the area. An ambulance later arrived to collect the body.Eyewitnesses at the scene said the workers who found the body were horrified. Some said the woman was "completely naked"."I first saw her legs pointing outwards and her head trapped inside. It is horrific & I just can't believe what I saw," one of the workers said.According to Colonel Khalil Al Mansouri, Director of the CID, the Burmese waitress had been reported missing five days earlier by her roommates and employer, Emirates airline."One of her male Indian colleagues, whom she hadarelationship with, has been in police custody since the day she was reported missing as it is believed he was the last person to be seen with her. We are still investigating the cause of death," he told Gulf News.A roommate said the deceased, 30, was "a beautiful, young, petite woman who was kind, loving and friendly - especially to her Myanmarese roommates".She said they had come to Dubai together in September 2008."She told us she befriendedacolleague around 15 to 20 days ago and that he proposed to her. I don't know if they were inarelationship. I think she saw him only asafriend," the roommate said.The woman said she last saw her friend on February 15, while on duty.Emirates declined to comment, saying it wasapolice matter.
ဖိုင်ရယူရန် Publish at Scribd or explore others: duty Hobby-Automotive Summary only...
file download here \_ပြည်တွင်းမှအီးမေးလ်များသို့တဆင့်ပို့ပေးခြင်းဖြင့်သတင်းအမှောင်ကျနေသောပြည်သူများကိုကူညီကြပါ။ Publish at Scribd or explore others: Summary only...